के अगरबत्तीको धुवाँ चुरोटको धुँवाभन्दा पनि हानिकारक हुनसक्छ? -
एजेन्सी– अगरबत्ती हाम्रो दैनिक रुपमा प्रयोग हुने वस्तु हो। पूजापाठमा यो अनिवार्य चाहिन्छ। अगरबत्ती अध्यात्मको प्रतीक हो भने यसले शान्ति र सुख दर्शाउँछ। यसको मिठो सुगन्धले आनन्द महसुस गराउँछ।
रिसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने? यस्ता छन् १४ उपाय-control anger 14 ways
April 24, 2019 April 24, 2019 khabarsansaar